संसदीय समितिमा उद्योग सचिवले झुटो बोलेपछि…- समाचार - कान्तिपुर समाचार
संसदीय समितिमा उद्योग सचिवले झुटो बोलेपछि…
काठमाडौँ — उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले सिमेन्टको मापदण्ड र गुणस्तरमा कुनै परिवर्तन नभएको बताएपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव खतिवडाले सिमेन्टको मापदण्ड परिवर्तन गरिएको फाइल तयार भएपनि संसदबाट पारित भइनसकेको र राजपत्रमा समेत प्रकाशित नभएकाले लागू नभएको दाबी गरेकी थिइन्।
समिति सभापति भरतकुमार शाहले सचिव खतिवडाले झुट बोलेको भन्दै मन्त्रालय र विभागले के गर्दैछ समितिमा थाहा हुने बताए। उनले मन्त्रीलाई समेत हस्ताक्षर नगराई फाइल राखेको भन्दै समितिलाई झुक्याउने प्रयास नगर्न सचिव खतिवडालाई चेतावनी दिएका थिए।
सचिव खतिवडाले नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको चुनढुंगा खानीमा ६-७ प्रतिशतसम्म अघुलनशील पदार्थ (म्याग्रेसियम अक्साइड) को मात्रा रहेको बताएपछि सांसदहरू आक्रोशित भएका हुन्। सांसद धर्माशीला चापागाईंले नेपालको कुनै पनि ढुंगा खानीमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी त्यस्तो अघुलनशील पदार्थ नभएको भन्दै सचिव खतिवडाको भनाई मान्न तयार नभएको बताइन्।
बैठकमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले परिमार्जित मापदण्ड कार्यान्वयनमा आइनसकेको र समितिले दिएको निर्देशन मान्न तयार भएको बताए। महानिर्देशक पुठासैनीको भनाइसँगै सांसद अमनलाल मोदीले विभागका कर्मचारी र मन्त्रालयको सचिव उद्योगीहरूको प्रभावमा परेकाले सिमेन्टको मापदण्ड परिवर्तन गरेको धारणा राखेका थिए।
सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले सिमेन्टमा म्याग्रेसियम अक्साइड र आइआरको मात्रा जति बढी भयो त्यति गुणस्तर कमजोर हुने थाहा हुँदाहुँदै पनि उद्योगीहरूको प्रभावमा परेर निर्णय गरेको बताए। त्यस्तै, सांसद प्रेमबहादुर आलेले जनताको हकमा भन्दा पनि उद्योगीहरूको हितमा मात्र काम गरेको आरोप लगाएका थिए।
नेपाल गुणस्तर परिषद्को गत आसार १८ गते बसेको बैठकले सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने अघुलनशील कच्चा पदार्थको मात्रा ५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै अर्को अघुलनशील पदार्थ (आइआर)को मात्रा २ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो।
परिषद्ले २०५५ सालमा तय भएको उक्त मापदण्डलाई परिवर्तन गरेर नयाँ मापदण्ड तयार गरेपछि सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर बनाउन लागिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको हो। लेखा समितिले परिषदको उक्त निर्णय कार्यान्वन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित : पुस ७, २०७६ १५:४८
'छक्का पञ्जा'ले सलमानले पाएको आधा सो पनि पाउँदैन : दीपकराज गिरी
काठमाडौँ — दीपकराज गिरीले निर्माता रोहित अधिकारीले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटसमा सहतम हुँदै लेखे, 'सत्य कुरा ।
सही हो, देशै उताबाट चल्या छ । हलको के कुरा, निर्माताहरू हलवालासँग डराउँछन्, हलवाला बितरकसँग डराउछन्, बितरक उताको खान्छन् अनि यता कराउँछन् !'
निर्माता अधिकारीले भने सलमान खान अभिनित फिल्म 'दबंग ३'लाई धेरै 'सो' दिएको भनेर आलोचना गर्दै लेखेका थिए, 'हिन्दी फिल्मलाई काखा र नेपाली फिल्मलाई पाखा कसरी गर्छन् त हलवालाहरु देखिहाल्नु भयो । यो दबंग भन्दा ४-५ गुणा बढी हाम्रो नेपाली फिल्म छक्का पञ्जाका सिरिजहरु चलेका थिए । तर सो चाहिँ ४-५ गुणा कम थियो । नेपाली फिल्म भएरै कम दिएको थियो ।'
यही स्ट्याटस सेयर गर्दै दीपकले हलवाला र बितरकको आलोचना गरेका हुन् । फेसबुकका वालमा खरो प्रस्तुत हुने दीपकसँग रीना मोक्तानले गरेको संवाद:
देश उतै (इन्डिया)बाट चलेको हो त ?
त्यो त 'इन्डिकेटसन' मात्रै हो । कुरा त सही नै हो । हामी राजनीतिक हिसाबले पनि आत्मनिर्भर छैनौं । सँस्कृतिका हिसाबले पनि आत्मनिर्भर छैनौं भन्न खोजेको हो त्यो खासमा ।
हलवाला र बितरकसँग यसरी खरो हुँदा गाह्रो हुँदैन ?
अँ, गाह्रो त हुन्छ । बोल्दा त गाह्रो पर्छ नि ! अब अलिअलि बोलिन्छ, अन्याय भएको कुरा लेखिन्छ । अरु त अन्याय सहन्छन्, तर मेरो त्यस्तो बानी छैन । मलाई त त्यसकै सजाय पनि होला आफ्नो फिल्म रिलिजको समयमा सो कम पर्छ । फिल्मलाई प्रभाव परिरहेको हुन्छ ।
'छ माया छपक्कै'लाई प्रभाव पर्‍यो भन्न खोज्नु भएको ?
हो, परेको थियो । सबै हलबाट त भएन । आधा हलबाट सहयोग त भयो । तर, आधा हलले सो कटौती गरिदिए । सोचेको भन्दा धेरै कम सो पायौं । सिधा कुरा के हो भने, सलमान खानलगायत अन्य फिल्मको दाँजोमा नेपालमा धेरै व्यापार गरेको फिल्म त 'छक्का पञ्जा' कै सिरिज हो । अनि मात्र हिन्दी फिल्म आउँछ । तर यहाँ त धेरै कमाउने फिल्मलाई नै सो दिन्नन् ।
हलवालाले यसरी काखापाखा गर्दा मिलेर जाउँ भन्ने हुँदैन ?
आफ्नो लागि मात्र हो भने समस्या छैन । तर, म अरुको पनि समस्या समाधान होस् भन्ने चाहन्छु । तपाईँ चाहिँ बाँच्नुस् अरुलाई मार्दिन्छु है भनेर कसरी हुन्छ त ?
हलवालाले त चल्ने फिल्मलाई बढी सो दिएको त हो । यसमा के समस्या ?
यसमा अलि बढी 'प्रोफेस्नल' चाहिँ क्यूएफएक्सको च्यानलका हलहरु छन् । क्यूएफएक्स ठूलो च्यानल भएका कारण बितरकको सिधा दबाब त्यसमा पर्दैन । 'कबड्डी कबड्डी कबड्डी'लाई धेरै सो दिएको थियो । त्यतिबेला हिन्दी फिल्म पनि त थिएन । उनीहरुसँग बिकल्पै थिएन ।
नेपाली फिल्म चलाएर मात्रै इन्डस्ट्री अघि बढ्छ त ?
मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन । हो, कतिवटा नेपाली फिल्मलाई दिएको एउटा सो पनि चल्दैन, बन्द हुन्छ । २ वटा सो दिएको हुन्छ, २ वटामा १ वटा सोमा दर्शक आइदिँदैनन् । अब त्यसलाई नेपाली फिल्म भनेर हलमा टिकाइराख्नुपर्छ भनेर सिकाइरहनु पर्दैन । तर, त्यस्ता फिल्म जसले पहिल्यै प्रमाण गरिसकेको छ । त्यस्तोलाई बढी सो दिनुपर्‍यो । 'जात्रा'को कुनै सिरिज आउला भोली । त्यसलाई धेरै सो दिनुपर्‍यो । जुन ब्यानरले आफूलाई प्रमाण गरिसकेको छ, त्यसलाई त सो दिनुपर्‍यो नि । नेपालको बक्स अफिसमा सलमान खानले बढी व्यापार गरेको छ कि 'छक्का पञ्जा' ले ? अवश्य 'छक्का पञ्जा'ले । भनेपछि 'छक्का पञ्जा'ले सो पाउनु पर्‍यो । तर 'छक्का पञ्जा'ले सलमानले पाएको आधा सो पनि पाउँदैन । 'दबंग'लाई ८८ सो दिइयो, 'छक्का पञ्जा'लाई ४० मात्र दिइएको थियो ।
प्रकाशित : पुस ७, २०७६ १५:४७